Wasiirka Maaliyadda oo shuruud ku xiray bixinta lacagta gurmadka Afgooye. | Keydmedia
Wasiirka Maaliyadda oo shuruud ku xiray bixinta lacagta gurmadka Afgooye.
Lacagtaan oo 20 cesho ka hor la balan qaaday ayaa u xayiran musuq Maasuq laga cabsi qabo in lagu sameeyo dadkii loogu tala galay.
Muqdisho, Soomaaliya - Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya ayaa shuruud adag ku xirtay bixinta lacagtii gurmadka aheyd ee loogu talagalay in la siiyo dadkii dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda Webiga Shabeele oo Dowladda horey u balan qaaday.
Lacagtaan oo cadad ahaan gaareyso Nus Milyan doollar ayaa waxaa horey u balan qaaday Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, isagoo amray in khasanadda dowladda laga bixiyo, haseyeeshee arintaas weli aan la fulin.
Sii hayaha Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle ayaa sheegaya in lacagtaas bixinteeda Wasaaradda diyaar la tahay, balse la la,yahay cidii lagu aamiini lahaa,oo lagula xisaabtami lahaa.
Wasiir Beyle ayaa sidoo kale sheegay in loo baahanyahay cid hanaan cad ka soo bixiso lacagtaan, islamarkaana lagula xisaabtami karo, waxaa uuna intaa ku daray in musuq Maasuq laga cabsi qabo.
Dhinaca kale Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa arintaan Wasaaradda Maaliyadda ku dhaliilay, iyagoona sheegay in ay ku guul dareysatay maareynta iyo bixinta lacagtaas oo loo baahnaa in mar hore la gaarsiiyo dadkii dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda Webiga.
Degmada Afgooye iyo tuulooyinka hoos taga ayaa waxaa ka barakacay ku dhawaad 10 kun oo qoys, kuwaas oo goryahooda ka cararay kadib markii uu ku soo fatahay Webiga Shabeelle oo mara gobollo ka tirsan dalka.
Warar 24 September 2020 15:27
Warar 24 September 2020 15:24
Warar 24 September 2020 15:22